Miyay Barcelona Lasoo Wareegaysaa Neymar Gudaha Suuqa Xagaagan? Tababaraha Barca Ee Ernesto Valverde Ayaa Jawaab Bixiyay. - Gool24.Net
Miyay Barcelona Lasoo Wareegaysaa Neymar Gudaha Suuqa Xagaagan? Tababaraha Barca Ee Ernesto Valverde Ayaa Jawaab Bixiyay.
August 10, 2019 Apdihakem Omer Adem
Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa wax laga weydiiyay arrimaha garabka kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar JR kaas oo mudo dheer si aad ah loola xidhiidhinayay kooxdiisa.
Neymar ayaa la rajaynayaa inuu gudaha xagaagan ka dhaqaaqo Paris Saint-Germain iyadoo lala xidhiidhinayo ku laabashada Barcelona isla markaana aysan meesha ka maqnayn inuu si layaab leh ugu wareegi karo Real Madrid.
Dhawaan ayaa la sheegay in kooxda tababare Zinadine Zidane ay dhigeeda Paris miiska u saartay dalab lacag iyo Luka Modric iskugu jira walow aan la ogayn haddii ay aqbali doonto.
Dhinaca kale waxa jira warar sheegaya in 27 jirkan ay Barcelona codsi u dirtay isla markaana u sheegtay inuu warka oo cad banaanka keeno si cadna saxaafada ugu yeedho isla markaana uu sheego inuu doonayo ku laabashada Camp Nou.
SIDOO KALE AKHRISO: Xidigii Liverpool Ay Rekoodhkeeda Suuqa Kooxdeeda U Jabisay Ee Andy Carroll Oo Si Layaab Leh U Qirtay Sheeko Lagu Xaman Jiray.
Haddaba, Tababare Ernesto Valverde oo wax laga weydiiyay haddii Neymar ay dib ula soo wareegayaan ayaa sheegay inay eegi doonaan waxa dhaca taas oo la micno ah inuusan meesha ka saarayn suurogalnimada ay kula saxeexanayaan.
Dhinaca kale Tababaraha ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay xiddigaha uu haatan ku haysto kooxdiisa oo ay dhammaatood yihiin kuwo fiican.
Valverde ayaa hadalkiisa ku furtay “Waynu arki doonaa waxa dhaca, Jawaabta qadiimiga ah ayaa ah inuu u ciyaaro koox kale taasina waa taas”
“Waxa aan ogahay oo dhan ayaa ah inaan anigu ahay tababare oo aan anigu ka fikiro wax ku saabsan ciyaartoyda aan haysto, Iyagu waa kuwa aan adeegsan doono berrito (Kulanka Napoli)”